I-Adobe ibonisa Ingubo kunye nokukwazi kwayo ukususa izinto kwividiyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Adobe iyaqhubeka nokusothusa ngokukwazi kwayo ukusinika izixhobo ngayo sinokuphantse sivelise izinto zomlingo, nangona zihlala zingaphaya kwetekhnoloji eqhubela phambili ngokuxhuma kunye nemida, ukusishiya siphantse simangaliswe sisixa sezinto esinokuzenza ngeenkqubo zabo.
Kwinkomfa ye-Adobe yoyilo, eyaziwa njengeAdobe MAX, inkampanithaca imbonakalo yetekhnoloji entsha abasebenza kuyo ngoku ukuyifaka kwiimveliso zakho. I-Cloack yitekhnoloji okanye into ekuvumela ukuba ususe izinto ezingafunekiyo kwiklip yevidiyo.
Ukuba besikhona ukhathazekile malunga naloo mbonisi ongalindelekanga oye wavela kwezinye iithoto erekhodwe esitalatweni, kwimiboniso emizuzu emi-6, iAdobe ibonise indlela abanokususwa ngayo kwividiyo.
Kuya kufuneka ucinge ukuba ukuba sifuna ukuphumeza into efanayo, Kuya kufuneka sidlulise isakhelo ngesakhelo ukuze sisuse into engalindelekanga. Inkqubela phambili enkulu ngaphandle kwamathandabuzo kwaye isongela ixesha lokusula, ngaphandle kokuba ngumsebenzi onzima nobunzima ukuwenza.
Ibi itekhnoloji yokulandela umkhondo yokuhamba esincedileyo kuphuhliso lweCloack, ikwancedwa yinto yokuba kwividiyo kukho ii-angles ezaneleyo zaloo ndawo inye esinokucoca ngayo umdlali ongalindelekanga kwindawo leyo.
Kwakukwimeko apho iAdobe ibonise indlela ukukhanya kwesitalato okukuvale ngayo umbono wecawe enkulu kwaye ukuba ingasuswa ngaphandle kwendlela enkosi kwiCloak. Itekhnoloji ngoku iyaphuhliswa kwaye ayikabhengezi ukuba izakufumaneka nini okanye ibandakanywe kwezinye zeenkqubo onazo kwilifu lokudala.
I-Adobe leyo landela ezabo ngohlaziyo kwiinkqubo zabo, kunye nale ubuchwepheshe obumangalisayo esinethemba lokuba kungekudala ezandleni zethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-Adobe Cloak, okanye indlela yokususa izinto ezingafunekiyo kuyo nayiphi na ividiyo
Ezona nkqubo zilungileyo zokwenza iividiyo